Generation manaraka COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Generation manaraka COVID-19
Dr. Garth speaking at WTN Next Generation COVID-19 podcast
Ny fihanaky ny virus coronavirus - ny COVID-19, taranaka manaraka, dia nipoitra ary tompon'andraikitra amin'ny fiakaran'ny aretina 70 isan-jato any Londres fotsiny. Namely tany Afrika Atsimo ihany koa io. Ny UK dia tafasaraka amin'izao tontolo izao, voafetra hijanona ao anatin'ny sisintaniny ihany. Ny vondrona eropeana (EU), Canada, Israel, ary Saudi Arabia dia nampiato ny sidina rehetra mankany sy avy any UK.
Tamin'ny podcast vao haingana, ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) - fandraisana andraikitra vaovao nipoitra avy amin'ny fananganana indray. Fifanakalozan-kevitra momba ny lalana izay natomboka tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity rehefa tonga zava-misy ny COVID-19 - dia niresaka tamin'ny dokotera mpitsabo sy ny manam-pahaizana momba ny coronavirus momba izay andrasana.
Dr. Peter Tarlow avy amin'ny Safer Tourism dia nilaza fa hatramin'io fotoana io dia nieritreritra izahay fa manomboka mahita ny hazavana amin'ny faran'ny tionelina miaraka amin'ny COVID-19, ary avy eo nisy olona tampoka nanidy ny jiro.
Nanazava izy fa mandritra ity podcast ity dia hiresaka amin'i Dr. Garth Morgan izy izay manam-pahaizana manokana amin'ny aretina mifindra ary koa mpampianatra ao amin'ny Texas A&M University in Medicine. Na dia mbola tsy fantatra aza ny antsipiriany rehetra momba io olana vaovao io, miaraka amin'ny fahalalana sy ny fahaizan'i Dr. Morgan, dia hiezaka izy ireo hijery ity toe-javatra miseho ity ao anaty adihevitra lojika indrindra miaraka amin'ireo vaovao fantatra hatreto.
Tokony hatahotra an'ity olana vaovao ity ve isika? Mampidi-doza ve ity? Nanantena izahay fa hahomby ireo vaksininy, nefa ankehitriny, tokony ho ao anaty fomba mikorontana ve isika sa tsia? Henoy ny podcast dia fantaro.
Ny World Network Network dia manomboka amin'ny volana desambra miaraka amin'ny fanombohana ofisialy manomboka amin'ny 1 Janoary 2021. Efa misy toko 12 eo an-toerana manerantany ary koa ireo vondrona miresaka momba ny lohahevitra samihafa. Amin'ity volana fanombohana voalohany ity dia efa nisy ary mbola hitohy ny fotoam-pivoriana manome fotoana hahafantarana ireo mpikamban'izao tontolo izao momba ny fizahan-tany sy handray anjara ary hihaino ireo adihevitra mahaliana momba ny dia sy fizahan-tany. Juergen Thomas Steinmetz, mpanorina ny WTN, dia nizara fa mety hisy izany hetsika izany nojerena sy henoina eto.
Raha misoratra anarana amin'ny fotoam-pivoriana ho avy, mankanesa any: https://wtn.travel/expo/
World Tourism Network (WTN) no feon'ny orinasa kely sy salantsalany (SME) maharitra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Amin'ny alàlan'ny fampitambarana ny ezaka, ny WTN dia mametraka lohalaharana ny filàna sy ny hetahetan'ireto orinasa ireto sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny tambajotra dia manome feo ho an'ny SME amin'ny fivoriana fizahan-tany lehibe miaraka amin'ny tambajotra ilaina ho an'ny mpikambana ao aminy. Amin'izao fotoana izao, ny WTN dia manana mpikambana mihoatra ny 1,000 amin'ny firenena 124 manerantany. Ny tanjon'ny WTN dia ny manampy ireo SME hiverina aorian'ny COVID-19.
Noteren'i New York ny quarantine ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena
Ny Uganda Airlines Airbus 330-800 voalohany dia tonga any Entebbe